အကောင်းဆုံး BM603-S-3-CS ထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံ။ | Gaoji
CNC ဘတ်စ်ကားပြွန်လောင်ကျွမ်းနေသောစက် ...
1. ပစ္စည်း: ကြေးနီ / လူမီနီယံ;
၂။ ထုတ်လုပ်မှုအထူ - ၁၆ မီလီမီတာ / ကြေးနီတုတ် ၂၅mm၊
3. အမြင့်ဆုံးလာကြတယ်: ∅32;
4. အများဆုံး output ကိုအင်အား: 600KN ။
2. အများဆုံးအရွယ်အစား: 15 * 160mm;
3. အများဆုံး output ကိုအင်အား: 350KN ။
BM603-S-3 စီးရီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှဒီဇိုင်းဆွဲထားသောဘက်စုံသုံးဘတ်စ်ကားထုတ်လုပ်သည့်စက်ဖြစ်သည်။ ဤစက်ကိရိယာများသည်တစ်ချိန်တည်းလုံးထိုးနှက်ခြင်း၊ ညှပ်ခြင်းနှင့်ကွေးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးကြီးမားသောဘတ်စ်ကားထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးပြုလုပ်နိုင်သည်။
လာကြတယ်ယူနစ်ကော်လံဘောင်ချမှတ်, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အင်အားကိုထမ်း, ပုံပျက်သောမရှိဘဲရေရှည်အသုံးပြုမှုကိုသေချာနိုင်ပါတယ်။ သေတွင်းမှထိုးစက်ကိုအပေါက်ဖောက်ခြင်းသည်တိကျမှန်ကန်ပြီးသက်တမ်းရှည်စေမည့်ဂဏန်းထိန်းချုပ်စက်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အလှည့်ကျအပေါက်၊ ရှည်လျားသောပတ် ၀ န်းကျင်၊ စတုရန်းအပေါက်၊ ထို့အပြင်ကြေးနီတုတ်ပြားကိုပြားစေခြင်းသို့မဟုတ်ညှပ်နိုင်သည်။
ကွေးယူနစ်သည်အနိမ့်အမြင့်ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်အဆင့်ကွေးခြင်း၊ ဒေါင်လိုက်ကွေးခြင်း၊ တံတောင်ဆစ်ပိုက်ကွေးခြင်း၊ terminal ကိုဆက်သွယ်ခြင်း၊ Z-shape သို့မဟုတ်လှည့်ကွေးခြင်းများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဤအပိုင်းကို PLC အစိတ်အပိုင်းများမှထိန်းချုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဤအပိုင်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိန်းချုပ်မှုအစီအစဉ်နှင့် ပူးပေါင်း၍ သင်လွယ်ကူစွာလည်ပတ်နိုင်သည့်အတွေ့အကြုံနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုရရှိစေနိုင်သည်။ အချိန်။
Control panel, man-machine interface: သူသည် software သည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသည်၊ အဆိုပါစက်ထိန်းချုပ်မှုကိန်းဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းကိုချမှတ်နှင့်စက်တိကျမှန်ကန်မှုကိုမြင့်မားသည်။
နောက်တစ်ခု: BP-50 စီးရီးများအတွက်လာကြတယ်ဝတ်စုံကို
အလုပ်လုပ်ခုံတန်းရှည်အတိုင်းအတာ (mm) စက်အလေးချိန် (kg) စုစုပေါင်းပါဝါ (kw) အလုပ်လုပ်နေသောဗို့အား (၅) ဟိုက်ဒရောလစ်ယူနစ်အရေအတွက် (Pic * Mpa) ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ
အလွှာငါ: 1500 * 1200အလွှာ II ကို: 840 * 370 1500 ၁၁.၃၇ 3803* 31.5 PLC + CNCကောင်းကင်တမန်ကွေး
ပစ္စည်း Processing Limite (mm) အမြင့်ဆုံးစွမ်းအား (kN)
လာကြတယ်ယူနစ် ကြေးနီ / လူမီနီယမ် ∅32 (16 * 160mm) )25 (Copper တုတ်) 600
ညှပ်ယူနစ် ၁၅ * ၁၆၀ (တစ်ပြိုင်တည်းထိန်းညှိနိုင်မှု) ၁၂ * ၁၆၀ (လက်ဖြင့်ထိုးခြင်းညှပ်ခြင်း) 350
ကွေးယူနစ် 15 * 160 (ဒေါင်လိုက်ကွေး) 12 * 120 (အလျားလိုက်ကွေး) 350
* ယူနစ်သုံးခုစလုံးကိုရွေးချယ်ခြင်း (သို့) ပြုပြင်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။